Juunyo | 2010 | WEEJIDOW
Archive for Juunyo, 2010
U.S. STATE DEPT. OFFICIAL “MAY MAY” LEARNING LANGUAGE !
Juunyo 30, 2010
Here is the official link to learn “May May” Language.
Abtirsiimada Qowmiyadda DigilMirifle Q-11aad
Afartan ugu danbeeya ee sil-silsiladda faricii Sheekh Mahamed Digil ee kala ah Macalin weyne, Reer Dumaal, Jiroon iyo Garwaale, isla markaana ah kuwa ugu da’da yar waxaa la isku yiraahdaa Afar Reer Baay.
Reer DigilMirifle waxaan ka soo sheekeynay meesha ay ku abtirsadaan oo aheyd laba qof, DigilMirifle, qabiilada qowmiyadda DigilMirifle todobo ka mid ah waxey ku abtirsadaan Cumar Diini oo ahaa Imaamkii guursaday gabadhii Aw Digil oo la oran jiray Caasha bintu Caleema Maxamed Digil, inta soo hartayna waxay ku abtirsadaan odeygii Aw Digil oo uuna dhalay 7 wiil oo laba ka mid ah mid uu degan yahay Iimeey, Itoobiya, meeshaasna uu ku tarmay ayna tarankiisu ilaa iyo hada degan yihiin, midna faraciisa wuxuu ku dhex darsamay Hariin iyo Dabare. Shanta soo hartayna afar ilaa iyo hada waxaa loo yaqaanaa Digil, midka todobaadna waa kan ay ka faracmeen dadka loo yaqaan hada Mirifle, qofka ay ka soo faracmeena waxaa la yiraahdaa Sheekh Maxamed Digil, faraciisuna waan idin soo sharaxay, hadana looma baahno inaan dib u sharaxo.
Umadda DigilMirifle waxa ay u qeybsameen laba qeybood, qeyb waxa ay heystaan magacii awoowgood oo ahaa Aw-Digil lana yiraahdo Reer Digil, qeybta kalena ay qaateen Mirifle oo ahaa wiilkii Reewing, Reewing-na awowgiisu waaba Sheekh Maxamed Digil. Qowmiyadda DigilMirifle sidaa ayey walaalo u yihiin waxeyna ka soo wada jeedaan hal odey waana odeyga Aw-Digil. Kuwa taariikhda beenta ka qora ayaa iska dhaadhiciyey in ay marin habaabiyaan qowmiyadan DigilMirifle, ayna ahaayeen kuwii soo dhaweeyey, dejiyeyna dhulkooda. Waxaan leeyahay kan soo fara gelinaayo abtirka qowmiyaddan DigilMirifle marka hore soo sax taada oo meel isa soo saar, hadii kale waxaad wadaa “intaan adiga wecel lagu dhihin dadka kale wecel dheh”, hadaadan isa soo cadeyna anagaa ku caddeyn doona.
Waxaan kaloo rabaa in aan sii kala dhig-dhigo Miriflaha, asagoo u kala baxaaya Sagaal iyo Sideed, sagaalka iyo sideedana ay ugu kala baxeen sida ay u kala degen yihiin, inta isla degtaaba loo yaqaan ama ay leedahay magac lagu garto, waxaan arintaa ku bayaaninaynaa qoraal iyo muujin gaaban si loo wada fahmo. Hadaan ku horeysiino Sideeda, Sideedu ma aha Sideed qabiil oo keliya ee magaca uun ayaa sidaa noqday, in badan oo Soomaalida ka mid ah waxey u fasirteen oo ay ka dhigaan Sideed qabiilood, hadaba arintu sidaa ma’ahee ee ogow in ayan aheyn sideed qabiilood ee waa sidan soo socota:
2)	Hariin = Sedi Boqol dembi
6) Qoomaal	=Afar Boqol Hori
10) Reer Dumaal
11) Macalin Weyne = Afar Reer Baay
13)	Leysaan = Lami Harqaan
Asharaaf oo ay ka wada dhaxeyso
2)	Luwaay = Lami Baroosili
4) Geelidle = Lami Ceelqode
6) Yantaar	= Lami Dhaa
7) Gasaar Gude
8) Gawaawiing =Sedi Ganaani
Sidaas ayey kala yihiin Sideed iyo Sagaal (Mirifle) oo weliba inta isla degtayba magacyo loo bixiyey, waloow ay ku jiraan kuwo isku aabo ah sida Afar Boqol Hori, Afar Reer Bay, iyo lami Eel-qodi, Afar Boqol Hori waxaa dhalay Hinjinle, waxaa kaloo la dhashay seddex wiil oo kale, kuwaas oo aan la degin, seddexda la dhalatayna waa Haraaw, Bari iyo Daa’ uud.
Afar Reer Bay-na waa isku aabo oo waxaa dhalay Garseed – Garjeele-Haraaw. Afar Reer Bay waxaa awoowe labaad u ah Haraaw.
Qore: Isaak Eeding Hassing (Isaak Doolow)
War Deg Deg ah: Ciidamada ka soo horjeeda Dowlada oo maanta qabsadey xaruntii hore ee Baarlamaanka DFKMG
Juunyo 29, 2010
Afhayeenka Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sheekh Cali Dheere) ayaa maanta shir jaraa’id ku qabtay Xaruntii Gaadiidka Booliiska ee Magaalada Muqdisho oo shalay qabsadeen oo ahayd meeshii Baarlamaanka DFKMG ku shiri jirey intii aan la dhisin guriga Umadda.
Sheekh Cali Dheere ayaa wuxuu sheegay in ciidamadooda ay ku guuleysteen inay goobo badan oo ay horay ugu sugnayd Dowladda Soomaaliya ay awood ciidan ku qabsadaan isagoo xusay inay dagaalkooda sii wadayaan inta ay la wareegayaan dalka oo dhan.
“Waxaad arkaysaan in Mujaahidiintu ay gacanta ku hayso xaruntii Gaadiidka Booliiska oo ay horay ugu sugnaayeen ciidamada Dowladda iyo kuwa AMISOM, waxaana naga go’an inaan sii wadno dagaalkeena” ayuu yiri Sheekh Cali Dheere oo la hadlayay Wariyeyaal ay maanta halkaas geeyeen si ay xaqiijiyaan qabsashadooda.
Goobta waxaa sidoo kale ku sugnaa Sheekh Muhktaar Roobow Cali (Abuu-Mansuur) oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee Xarrakatul Shabaab, wuxuuna sheegay inuu aad u wanaagsan yahay, isagoo ka jawaabayay warar hore oo sheegayay inuu dhaawacmay.
Ciidamada Xarrakatul Shabaab ayaa waxay ku sugnaayeen Isgoyska Baar Fiat oo horay ay u sheegeen ciidamada AMISOM inaan loosoo dhaafi karin, waxaana uu Afhayeenka Xarrakatul Shabaab sheegay in Ujeedada dagaalladan ay yihiin si ay u koobaan deegaannada ay dowladdu gacanta ku hayso.
Dagaallo iyo duqeymo ka dhacay Waqooyiga Muqdisho gaar ahaan goobihii ay shalay la wareegtay Xarrakatul Shabaab ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 2-qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 10-qof oo ay ku jiraan wariyeyaashii la geeyay halkaas.
Saraakiisha Dowladda Soomaaliya ayaa weli waxay ku adkeysanayaan inaanay jirin goob laga qabsaday iyadoo Xarrakatul Shabaab ay geysay saxaafadda goobihii ay shalay gabbal-dhicii kula wareegeen dagaalka.
Qabsashada deegaannadan cusub ee ay la wareegtay Xarrakatul Shabaab ayaa imaanaya iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif iyo Taliyaha Milateriga Gen. Maxamed Geelle Kaahiye ay sheegeen inay ciidankooda u diyaariyeen dagaal.
Warar kale ayaa sheegaya in Maamulkii dhawaan Culumaa’udiinka Ahlu Sunna ay u magacaabeen gobolka Banaadir ayaa maanta Magacaabay Xubno cusub ee ka mid noqonaya Maamulka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Banaadir.
Kadib war qoraal ah oo Maanta ka soo baxay Xafiiska gudoomiyaha Maamulka Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Banaadir Sheekh C/qaadir Macalin Nuur Max’ed Siyaad ayaa waxaa lagu magacaabay Xubno cusub oo ka mid noqonaya Maamulka Culumaa’udiinka Ahlu Sunna ee gobolka Banaadir.
Xasan Max’ed Sheekh Axmed oo ka mid ah saraakiisha ugu sar sareysa Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Banaadir oo warka qoraalka ah ee ka soo baxay Xafiiska Ahlu Suna ee Maamulka gobolka Banaadir saxaafada u aqrinyay ayaa sheegay in gudoomiye ku xigeenka loo magacaabay Sheekh Axmed Sheekh Aadan Sheekh Cumar.
Xubnaha cusub ee la magacaabay ayaa waxaa ay kala yihiin
1-Sheekh Axmed Sheekh Cumar oo loo magacaabay Gudoomiye ku xigeen,
2-Sheekh C/raxmaan Sheekh Max’ed Nuur oo laga dhigay xoghayaha amniga,
3-Cali Xasan Cabdala oo isna loo magacaabay Xoghayaha Caafimaadka,
4-cadde Iimaan Sheekh C/raxmaan oo laga dhigay xoghayaha Samafalka
5-Sheekh Aadan Macalin Macalin oo loo magacaabay xoghayaha Maaliyadda.
Sidoo kale Xasan Max’ed Sheekh Axmed waxaa uu sheegay in uu Maamulka Culumaa’udiinka Ahlu Sunna Waljamaaca ee gobolka Banaadir uu iminka rajeynayo in ay shaqadooda u gutaan si wanaagsan.
Abtirsiimada Qowmiyadda DigilMirifle Q-10aad
Mirifle: Waxaa dhalay Reewing, Miriflaha waxaa la dhashay seddex wiil oo la kala yiraahdo Caleemo Reewing, Begedi Reewing iyo Jambaluul Reewing. Aabihii Reewing waxaa dhalay Sifir, Sifir-na Kalmugi, Kalmugi-na Talmadar, Talmadar-na waxaa dhalay Shiikh Maxamed.
Shiikh Maxamed oo awoowe afaraad u ah Mirifle waxaa la dhashay lix wiil, waxaana todobadoodaba dhalay odeygii Digil.
Lixda wiil oo Sheekh Maxamed la dhalatay waxaa la kala yiraahdaa:
1)	Ali Digil (Jiiddo)
2)	Mataay Digil (Dabare, Iroole)
3)	Cumar Digil (Garre)
4)	Ciise Digil (Tuni)
5)	Cusmaan Digil (Duub dheere): wuxuu asaga ku biiray Hariin iyo Dabare
6)	Digiin Digil: waxa uu faraciisa oo dhan degan yihiin Iimay, Itoobiya.
Odeyga Digil waxa uu ku sii abtirsadaa Sab, Sab-na waa awoowaha labaad ee Digil, waana sidan abtirkiisu:
Aw Digil, Deysan, Cumar, Sab, Axmed,
Sab-na waxa ay wada dhasheen oo ay isku aabe yihiin Samaale, aabahoodna waa Axmed
Inta aan kor ku soo sheegnay waa meesha uu Mirifle Reewing ka yimid, hadana waxaan wax ka taabaneynaa sida uu Mirifle Reewing u farcamay, anagoo weliba kala saareyno dadka ay wada dhasheen iyo ruuxa waalid ahaa iyo ruuxa wiilka ahaa.
Mirifle Reewing waxa uu dhalay laba wiil oo kala ah Cadde iyo Madoobe, Cadde Mirifle Reewing waxa uu dhalay lix wiil oo la kala yiraahdo:
Madoobe Mirifle Reewing waxa uu dhalay laba wiil oo la kala yiraahdo:
1}Cali Madoobe (Eelaay)
Eelaay iyo Dhargane waxaa adeer u ah Cadde, waxeyna ilmo adeer ay yihiin caruurta Cadde.
Eelaay-na waaba la yaqaan waa aabihii reer Mirifle Reewing.
Dhargane Madoobe waxa uu dhalay asagana laba wiil oo la kala yiraahdo:
Labadan wiil waxaa adeer u ah Ali Eelaay, waxaa kaloo adeer labaad u ah caruurta Cadde sida: Heledi iyo Yantaar.
Hinjinle waxa uu dhalay todoba wiil oo la kala yiraahdo:
3} Eemid Hinjinle
Bari Hinjinle waa Leysaan Bari, Daa’uud-na lama hayo faraciisa.
Caruurtan Hinjinle waxaa adeer u ah Hariin, waxaana awoowe u ah Eelaay.
Disoow, Qoomaal, Eemid, Yalali, (Hinjinle) waxaa la isku yiraahdaa Boqol Hori.
Haraaw Hinjinle waxa uu dhalay laba wiil oo la kala yiraahdo Lawli iyo Garjeele, waxaana adeer u ah dhamaan caruurta Hinjinle oo ah awoowgood Garjeele Haraaw kaas oo uu dhalay sedex wiil oo kala ah Garseed, Hasan iyo Irir. Wiilashan waxaa awoowe u ah Haraaw, waxaana adeer u ah Lawli.
Garseed Garjeele Haraaw waxa uu dhalay afar wiil oo la isku yiraahdo:
Afar reer Baay, waxa ayna kala yihiin:
1)	Macalin Weyne
2)	Reer Dumaal
Abtirsiimada Qowmiyadda DigilMirifle Q-9aad
Juunyo 28, 2010
Anigoo intii badneyd soo bandhigay ayaa waxaan jeclahay hadana inaan si fiican u soo koobo intii ii hartay, anigoo weliba tusaalooyin ka bixin doono qabiil walba sida ay abtirsiimadiisu tahay iyo qof walboo DigilMirifle ah meesha uu galayo, iyo weliba si ay ugu cadaato ama uu u fahmo ruux walba oo buugan akhrisanaaya, waxaana tusaale u soo qaadaneynaa laba qabiil abtirsiimadooda, kuwaas oo kala ah Jilible iyo Jiroon.
Jilible sida uu u abtirsanaayo waa sidan:
1} Jilible Ceel qode, Warantable, Subuge, Dab, Omar Diin (Galadi).
2} Jiroon,Garseed, Garjecle, Haraaw, Hinjinle, Dhergane, Madoobe, Mirifle, Maxamed Reewing (Raxweyn), Sifir, Kalmuge, Talmadar, Sheekh Max’ed Digil, Daysan,Cumar, Sab, Axmed, Cabduraxmaan, Max’ed, Axmed Hanbal, Muuse, Mahdi Bin Abuubakar.
Intaa waa tusaalihii abtirsiimadii DigilMirifle, qofkii yaqaana wuu yaqaanaa kaan aqoonina sidaa u baro.
Magaca ah Qoomaal asal ahaan waxaa laga wadaa Qumaal oo macnaheedu yahay Injir.
Intaa waxaa ku dhamaaday abtirsiimadii caruurta Max’ed Reewing
(Rax-weyn) mid ka mid ah kaas oo ah Mirifle, waxaana harsan sedexda kale oo la kala yiraahdo Caleemo, Jambaluul iyo Begedi.
A)	Caleemo: waxa uu dhalay laba wiil oo lakala yiraahdo:
1} Kasaanle Weyne
2} Kasaanle Yare
Kasaanle Weyne: magaciisu waa Erdho, Kasaanle Yarana magaciisu waa Hiifmuge, labadaba hada waxey ka tirsan yihiin Digil oo si gooni ah waxey ka mid yihiin Shanta Caleemood, waana laba ka mid ah shantaas qabiilood oo la isku yiraahdo Shanta Caleemood. Magaca Shanta Caleemoodna waxa uu ka yimid odeyga la yiraahdo Caleemo Max’ed Reewing (Rax-weyn).
B)	Jambaluul: waxa uu dhalay Magalaan iyo Madi Gesi, waxeyna degaan Daafeed.
C)	Begedi: wuxuu dhalay afar wiil oo la kala yiraahdo.
A)	Maxamed: Caruurtiisa waxa ay degan yihiin degmada Aw-Dheegle
Sedexda kalena waxay ku biireen Eelaay sidaan horeba u soo sheegnay, waxeyna degan yihiin Buur Hakaba. Hasan iyo Cali caruurtooduna waxa ay wataan magacii awowgooda Begedi, waxeyna la degan yihiin Waraasili. Caruurta Jibriilna waxa ay la degan yihiin Bo’horaad.
Hadaan in yar wax ka iraahdo sababta igu keliftay inaan qoro abtirsiimada Digil iyo Mirifle waxa ay tahay anigoo soo maray wadamo badan oo aduunka ka mid ah aan ka aheyn Asiya (Asia) iyo Austaraaliya (Australia), lana soo kulmay dad badan oo DigilMirifle ah, kuwaas oo aan aqoon abtirsiimadooda taasna ay ugu wacan tahay waaliddiintooda oo aan haba yaraatee barin abtirsiimadooda, waxaa taasna u sii dheer tashwiish ay ku fureen dadka u dhashay lahjadda Mahaa tiri, tashwiishkaas oo salka ku hayo si ay u kala qeyb- qeybiyaan DigilMirifle, ka dibna ay dhaxlaan dhulkooda ayagoo iska dhigaayo iney hal meel ka soo wada jeedaan iskuna abtirsadaan, waxaana taa daliil u ah anigoo arkay qof Mirifle ah oo aan kula kulmey Waqooyiga Ameerika oo uu sheeganaayo Daarood.
Waxaan sidoo kale kula kulmay Galbeedka yurub “West Europa” qof Digil ah, kaasoo aan is wareysaney anagoo weliba ku wada hadleyno luqadda May-maayga, ruuxaas oo igu yiri anigu ma ihi Rax-weyn, markaana aan ku iri halkee u kala wadaa DigilMirifle, waxaana ku iri Mirifle sow caruurtii Digil ma aha? Waxaan kaloo ku iri ayadoo aan Digil la oran Mirifle ma la oran karaa?. Ninkii wuu gareystay, xiriir ayaana yeelanay, waana qof aan isku abtirsano, laakiin aan isaga abtirkiisa wax fikrad ah ka heysan. Aniga hada laba tusaale keliya ayaan soo qaatay ee waxaa ka badan inta ka xishooneysa iney sheegtaan DigilMirifle, sabatuna waxa ay tahay maba garanaayaan abtirsiimadooda. Waxaan kuwaasi leeyahay ha xishoonina, idinkaa dhalad ahee oo la idin yimid, marka ogaada ninka idin yimid baa shaki ku jiree.
Abtirsiimada Mirifle waxaan u kala saareynaa laba qeybood, oo kala ah meesha uu Mirifle ka yimid iyo faraciisa sida ay kala yihiin ama u farcameen.
Duqeeyn dad ay ku geeriyoodeen oo Muqdisho lagu garacay xili Baarlamaanka uu kulunsanaa
Juunyo 27, 2010
Duqeeyn culus oo geeysatay qasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac dada rayid ah ayaa maant waxaa lagu garaacay Xafado ka mid degmooyinka Hodan iyo Howl-wadag ee gobolka Banaadir ka dib markii xoogaga mucaaradka madaafiic ku garaaceen kulan maanta Baarlamaanka Soomaaliya uu ku lahaa Guriga Umada ee Magaalada Muqdisho.
Ka dib markii Xoogaga Mucaaradka Tiro madaafiic ah ay ku garaaceen Xarunta golaha Shacabka ayaa ciidamada Midoowka Afrika oo sugay amaanka guriga Umada ayaa jawaab culus waxa ay ka bixiyeen madaafiicda xoogaga mucaaradka ay tuureen.
Duqeeynta ciidamada Amisom ayaa waxaa lala bartilmaameedsay qeybo ka mid ah degmooyinka Hodan iyo Howlwadag ee Gobolka Banaadir, waxaana madaafiica ay tuureen ciidamada Midoowka afrika qaar ka mid ah ku dhaceen Suuuqa Bakaaraha ee Magaalada Muqdisho.
Sida ay xaqiijiyeen dadka degan xaafadaha madaafiicda lagu garaacay iyo saraakiisha gawaarida gurmadka deg deg ah , waxaa ay madaafiicda sababatay dhimshada hal qof iyo dhaawac tiro kale inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in qasaaraha uu intaasi ka badan yahay.
Dhinaca kale, Xidlhiabaan Salaad Cali Jeele oo ka mid Mudanayaasha baarlamaanka dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa maanta waji gabax la kulmay ka dib markii uu ka hadlay kulanka maanta xarunta Baarlamaanka ay ku qaateen Xildhibaanada Baarlamaanka Dowlada Soomaaliya oo ay goob jooga ka ahayeen Gudoomiye Baarlamaanka Shariif Xasan iyo ku xigeenadiisa.
Ajandaha kulanka maanta oo ahaa in Todobaadkii Sedex maalin uu kulmo Baarlamaanka kaasi uu soo jeediyey gudoomiyaha baarlmaanka Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo kulanka Shirgudoonka ahaa ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka.
Xildhibaan Salaad Cali Jeele oo ka mid ahaa mudanayaasha kulanka ka hadlay ayaa markii uu isu dayey in uu hadal u istaag waxa hal mar uu qeeylo kala kulamay inta badan Mudanayaasha Baarlamaanka ka dib markii afkiisa uu ka soo baxay hadal ahaa in gudiyada baarlamaanka sidii hore lagu daayo, waxaase arinkaasi caro geliyey mudanayaasha baarlamaanka intooda badan.
Salaad Cali Jeele ayaa qeylo lagu fadhiisiyey waxa uuna ka codsay gudiga anshaxa Baarlamaanka Dowlada KMG in ay wax ka qabtaan , meel ka dhac uu sheegay in ay wadaan mudanayaasha Baarlamaanka soomaaliya qaarkood.
Waxaa kaloo ka mid ahaa mudanaayshii kulanka ka hadlay Muuse Suudi Yalaxoow waxa uuna soo jeediyey in Baarlamaanka KMG Soomaaliya uu kulmo maalin kasta marka laga reebo maalinta Jimcaha ah, hasa ahaatee Gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ugu danbeyeeyn sheegay in uu xiran yahay kalfadhiga , waxa uuna Baarlamaanka ku balamiyey in barito leeysku soo laabto.
War Deg Deg ah: Is rasaasayn dhex martay ciidamo ka wada tirsan dawladda federalka oo maanta ka dhacday isgoyska Banaadir
Ciidamo ka wada tirsan dawladda federalka Soomaaliya ayaa waxa ay maanta barqadii isku rasaaseeyeen inta u dhexeysa isgoysyada Soobe iyo Banaadir ee magaalada Muqdisho, taasi sababatay qasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray qaar ka mid ah ciidamada dawladda iyo dad rayid ah oo goobtaasi ka ag dhowaan.
Goob jooge ku sugnaa nawaaxiga goobta ay is rasaasaynta ku dhex martay ciidamada dawladda federalka ayaa waxa uu sheegay in gaari dagaal oo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federalka ay rasaas ku fureen labo askari oo ku sugnaa inta u dhexeysa isgoysyada Soobe iyo Banaadir, kuwaasoo markii ay geeriyoodeen ay qoryahoodii qaateen ciidamadii la socday gaariga dagaalka.
Daqiiqado kaddib ayaa waxaa goobta soo gaaray cutubyo kale oo ka tirsan ciidamada dawladda federalka kuwaasi oo rasaas ku furay dadweyne fara badan oo ku soo xoomay halka lagu dilay labada askari ee ka tirsan dawladda federalka Soomaaliya, waxaana rasaastaasi ku dhaawacmay labo qofood oo rayid ah oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa goobtaasi, waxayna ciidamadii goobta ka qaadeen maydka labada askari.
Waxaa sii kordhaya iska hor imaadka ciidamada dawladda federalka ku dhex mara goobaha ay dawladdu ka taliso, shalay ayayna ahayd markii sidan kale oo kale is rasaasayn dhex martay ciidamo ka wada tirsan dawladda federalka ay sababtay dhimasho iyo dhaawac, waxaana jira baaqyo ay talisyada ciidamada jeedinayaan masuuliyiinta maamulka gobolka Banaadir oo ku aaddan in la xakameeyo ciidamada faraha badan ee magaalada dhex wareegaya.
Maamulka Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin ee Gobolka Banaadir oo maanta soo bandhigay lacag gaaraysa 100-Milyan oo Shilin Soomaali ah
Maamulka Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin ee Gobolka Banaadir ayaa maanta u soo bandhigay Saxaafadda Muqdisho lacag gaaraysa 100-Miyan oo Shilin Soomaali ah, taasoo ay sheegeen inay tahay Faalso.
Sarkaal ka tirsan Maamulkan oo ka hadlay goobta lagu soo bandhigay lacagta ayaa sheegay in lacagtaan ay ka qabteen suuqa Bakaaraha lana doonayay in dhaawac lagu gaarsiiyo ganacsiga iyo sarifka lacagaha qalaad.
Howlgallo baaritaanno ah oo uu maamulka Gobolka Banaadir ee Xarrakatul Shabaab ku sameeyay sariflayaasha Suuqa Bakaaraha ayaa lagu soo qabtay lacagtan, waxaana loogu amaray shacabka Muqdisho inay ka fogaadaan isticmaalka lacagtan.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan soo dagsatay lacago Shilin Soomaali ah, kuwaasoo lagu soo sameeyay dalalka Caalamka qaarkood, waxaana lacagtan cusub ay dibadda u soo baxday todobaadyadan.
Waa markii ugu horreysay oo Xarrakatul Shabaabul Mujaahidiin ay diido lacag Shillin Soomaali ah, waxaana maamulku uu uga digay mar kale shacabka Soomaaliyeed inay isticmaalaan lacagtaas oo ay ku sheegeen inay tahay mid faalso ah.
Dalka Soomaaliya oo aanay dowlad shaqeysa ka jirin tan iyo 1991-kii ayaa lacagta la isitcmaalo waxay ahayd mid xilliyo kala duwan lasoo sameeyay, iyadoo tani ay qayb ka tahay lacagaha Shilin Soomaaliga ah ee lagu soo sameeyay dibadda.
Wasiirrada Difaaca Bariga Afrika oo Qarammada Midoobay ka dalbaday in Soomaaliya la geeyo ciidamo ka socda dalalka dariska ah
Juunyo 26, 2010
Wasiirrada Difaaca dalaka Geeska Afrika oo kulan ku yeeshay Nairobi todobaadkii hore ayaa ka codsaday Qarammada Midoobay inay baabi’iso qaraarka 1725 ee mamanuucaya in ciidamo ka socda dalalka dariska la geeyo Soomaaliya.
Nuqul ka mid ah codsiga ay soo-jeediyeen Wasiirradan oo ay daabacday Reuters ayaa looga dalbaday Qarammada Midoobay inay qaraarkaas ka laabato, si dalalka Itoobiya, Jabuuti iyo Kenya ay ciidamo u geeyaan Soomaaliya.
“”Kulanka waxaan uga codsaday Qarammada Midoobay inay dib u eegto qaraarka 1,725 ee looga mamanuucay dalalka dariska ah inay ciidmo u diraan Soomaaliya” ayaa lagu yiri warbixinta ay kasoo saareen kulankooda Wasiiradda Difaaca dalalka Bariga Afrika.
Dalka Jabuuti oo ka mid ah dalalka dariska la ah Soomaaliya ayaa waxay horraantii sannadkan sheegeen inay Soomaaliya u dirayaan ciidamo gaaraya 450-Askari si ay uga mid noqdaan AMISOM oo nabad ilaalin ahaan u joogta Soomaaliya.
Ciidamada Midowga Afrika ee ku sugan Muqdisho ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 6,000-askari, waxayna ka socdaan dalalka Burundi iyo Uganda, iyadoo Wasiirradu ay ka dlbadeen dalalka dariska la ah Soomaaliya inay 2,000-askari geeyaan Muqdisho.
Sarkaal sare oo ka tirsan Dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in go’aanka ay gaareen Wasiirrada dalalka bariga Afrika uusan ahayn mid xal u ah dalka Soomaaliya.
“Waxaan diidnay inaan saxiixno go’aankan innagoo eegayna danaha dalkeenna iyo dadkeena, waayo waa faragelin xasaasi ah, gaar ahaan dalalka Kenya iyo Itoobiya, kuwaasoo xuduudo la leh dalka Soomaaliya” ayuu yiri Sarkaal Soomaali ah oo magaciisa qariyay kaasoo u warramayay Wakaaladda Wararka Reuters.
“Ma ogolaan karno heshiiskaas oo kale xiligan, Laakiinse haddii ciidamadu ay yihiin kuwo ku imaanaya Magaca Qarammada Midoobay ama Magaca Midowga Afrika waan aqbalaynaa” ayuu hadalkiisa raaciyay sarkaalka.
Wasiirrada Difaaca Afrika ayaa sidoo kale codsaday in la xoojiyo ciidamada AMISOM ee ku sugan Muqdisho, Dowladda Soomaaliyana loo tababaro ciidamo gaaraya 22,500-askari si ay awood ugu yeelato inay dalka wax ka qabato.
Wariyaal ka tirsan AL Jazeeera iyo laamaha BBC qeeybaheeda Sabaahiliga iyo Engaliisha oo lii diiday doorashooyinka Soomaliland in ay tabiyaa
Ciidamada Booliska Somaliland ayaa dib uga celiyey garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Hargaisa laba wqariye oo ka socday TV-ga Al-Jazeera ee caalimga ah kuwaas oo ka amba baxay magaalad Muqdisho, waxaana dib loogu soo celiyey magaalada Muqdisho.
Wararka aanu ka heleyno magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in wariyaasha AL-Jazeera xitaa loo diiday in ay gudaha u galaan magaalada, iskaba daa in ay kasoo hadlaan doorashada.
Sidoo kale waxaa amar lagu siiyey in ay Hargeysa isaga baxaan wariyaasha kala ah, Maxamed Colad Xasan oo u hadla BBC-da qeybta Africa iyo Wold Service iyo Wariye Bashkash Jug Soo Dhacay oo isna ka socday BBC-da laanteeda Afka Sawaaxiliga.
Colaad oo BBC-da uga hadlo Muqdisho ayaa waxaa Hargaisa u degan xaaskiisa iyo caruurtiisa, sidaasi daraadeed wuxuu ku adkeystay in uu yahay nin deegaan ah isla markaana aanan meelna uga socon magaalada, halka Bashkas Jugsoo dhacay uu isna sheegay in uu isaga tagayo Hargeysa.
Waxaa arintan ka xumaaday axsaabta Mucaaradka oo sheegay in dowlada ay ku dooneyso in ay ku qariso qaladaadka si beesha caalamka aanu ula socon waxyaabaha ka dhacayo doorashada.
Dhinaca kale shacabka Soomaaliland ayaa saakay u dareeray goobaha cod bixinta iydoo Magaalada Hargeysa dadku ay usoo baxeen saakay aroortii, halka Gobolka Sool oo isagu ay ku dirrisanyihiin Somaliland iyo Puntland dadku ay isu diyaariyeen in ay codkooda dhiibtaan.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Juunyo, 2010.